Handball vehivavy – «Can 2021»: lozika ny faharesen’ny Malagasy nanoloana an’i Senegal | NewsMada
Voahaja ny lozika teo amin’ny fihaonan’i Madagasikara sy ny Liona-n’i Teranga avy any Senegal, teo amin’ny lalao voalohany ho an’ny vondrona “A”, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2021), taranja handball, sokajy vehivavy. Fihaonana, notanterahina tany Yaounde, Kameronina, omaly alarobia. Noporofoin’ny Senegaly, ny maha tompondaka lefitra azy ireo.
Niondrika tamin’ny isa mazava, 42 no ho 16 ny Malagasy, izay sambany vao niatrika ny Can. Tsy niady mihitsy ny fihaonana satria nanjaka tokana ny Senegaly. Teo amin’ny 5 minitra voalohany ihany ny hany mba afaka nanohitra ny Malagasy, satria nifanakaiky ny isa, 4 no ho 2. Taorian’izay, nihataka tsikelikely ny liona vavy ka niitatra be ny isa teny amin’ny solaitra be. Be loatra ny fikoropahana teo amin’ireo mpilalao malagasy ka verivery foana ny baolina. Hita ihany koa ny tsy fahampian’ny fiarahan’ireo mpilalao avy eto an-toerana sy ireo mpila ravinahitra, hany ka tsy mirindra ny fanafihana teo amin’izy ireo. Eo koa ilay tsy fahampian’ny lalao goavana. Porofon’izany, ny lesoka teo amin’ny mpiandry tsatoby.
Tetsy an-kilany, efa manana ny traikefa amin’ny fahazaran-dalao lehibe ny Senegaly, notarihin’i Diop, anisan’ireo nahatafiditra baolina be indrindra i Camara sy i Dapina ary i N’Diaye.
Teo am-pialan-tsasatra dia efa nitarika tamin’ny isa mazava, 20 no ho 9 ny Liona vavy avy any Teranga. Fizaram-potoana faharoa, vao mainka nanampatra ny tanjany sy ny fahaizany ry zareo Senegaly ka nisesy ny baolina maty. Tetsy an-kilany, nitsitapitapy ny baolina tafiditry ny Malagasy.
Hifandona amin’i Tonizia i Madagasikara eo amin’ny lalao faharoa, hotanterahina rahampitso zoma 11 jona, ho avy izao.